Palestina: Andian-tSambo Vaovao Handrava ny Fahirano Mahazo an’i Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2011 14:01 GMT
Nipongatra androany hizotra ho any Palestina, handrava ny fahirano mahazo an'i Gaza, ny andian-tsambo Kanadiana sy Irlandey. Nafenina ho tsiambaratelo ity tetikasa ity ary izay vao nolazaina. Ao amin'ny Twitter, ny filazana ity vaovao ity dia niely tamin'ny alalan'ny tenifototra (Onjam-pahafahana) #Freedomwaves.
Lazaina ho ao amin'ny fari-dranomasina iraisampirenena, ranomasina Mediteranea, ny sambo kanadiana antsoina hoe Tahrir sy Irlandey Saoirse, ary mikasa ny hisosa ho any Gaza ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Ny fikasana teo aloha handrava ny fahirano mahazo an'i Gaza tamin'ny herintaona [Jereo ny Global Voices Fitantarana Manokana momba izany ato (en)] dia niafara tamin'ny fifandonana rehefa naka an-keriny ilay andian-tsambo enina mitondra mpikatroka iraisampirenena, fantatra tamin'ny anarana hoe Gaza Freedom Flotilla (Andian-tsambo Fanafahana an'i Gaza), ny vondro-tafika andranomasina Isiraeliana. Efa nikasa hamaky ny sakana ataon'i Isiraely amin'i Gaza sy hitondra fanampiana ihany koa io andian-tsambo tamin'ny herintaona io. Araka ny loharanom-baovao Isiraelina moa dia niditra an-tsehatra ny tafika rehefa tsy nanaiky ny hiova lalana hosavaina tao an-tseranan'i Ashdod, izay nampanantenain'i Isiraely hisavana ny fanampiana ka handefa ny zavatra tsy voarara ho any Gaza.
Teo anelanelan'ny 9-16 teo ny mpandeha tao amin'ny sambo mitondra saina komoriana MV Mavi Marmara no nolazaina ho matin'ny miaramila Isiraeliana izay niditra tao an-tsambo, miaramila Isiraeliana 10 ihany koa no naratra mafy.
Araka ny nolazain'i Ruqayah:
Ny onjam-pahafahana ho an'i Gaza no ezaka faha-11 nataon'ny mpikatroka iraisampirenena handefasana fanampiana hanavatsava ny fanakanana isiraeliana hatramin'ny 2008
Momba ity andian-tsambo vaovao ity indray, manambara i Canada Boat to Gaza :
VOAMARINA: efa any amin'ny fari-dranomasina iraisampirenena ny Tahrir ary hitodi-doha tsy ho ela any Gaza.
Manamarika i Asa Winstanley:
Mety ny nitazonana ho tsiambaratelo ny #onjam-pahafahana hatramin'ny androany. manimba ny fahafahan'ny Isiraeliana higafy sy hilaza lainga, tahaka ny tamin'ny farany
Manasongadina momba ny mpitati-baovao nandeha niantsambo ihany koa ny vaovao.
Mitatitra ilay Ejipsiana Sarah Carr:
Ao amin'ny Tahrir, iray amin'ny sambo roa mandrafitra an'i Onjampahafahana mizotra mankany Gaza ny deba @linaattalah.
Manampy i Ahmed Shibab Eldin:
Manana mpanangom-baovao ao amin'ny Onjampahafahana mizotra ho any Gaza ny Al Jazeera
Mampahafantatra ny fandehanan-dry zareo anaty sambo ihany koa ny mpisera Twitter.
Hassan Ghani, Mpanangom-baovao Press TV :
Ato an-tsambo Tahrir, iray amin'ny andian-tsambo, aho ary anaty fari-dranomasina iraisampirenena handrava ny fahirano amin'i Gaza.
Niainga tsy ankilazalaza avy any an-tseranana tiorka ny Onjampahafahana hialana amin'ny resaka politika. Saingy nampihena ny mpandeha ho 12 isaky ny sambo ny tompon'andraikitra an-dranomasina
tapatapaka ny aterineto ato amin'ny #tahrir saingy manantena aho fa afa-mitatitra momba ny iraky ny Onjampahafahana rahalina
Ary ilay Ejipsiana Lina Attalah, miaraka amin'ny Al Masry Al Youm, miteny amintsika:
nahazo ny fari-dranomasina iraisampirenena izahay ato amin'ny sambo kanadiana hizotra ho any Gaza
Aza miala hanarahanao ny vaovao avy amin'ny andian-tsambo.